Ingiriisiga oo ah Luqad Labaad (ESL) oo ka tirsan Jaamacadda Hodges
Categories: Ingiriisiga Oo Ah Luuqad Labaad, Featured
Raadi Jidkaaga aad ugu guuleysato Barnaamijkeenna ESL-ka!
Barnaamijkan shahaadada waxaa loogu talagalay inuu bixiyo Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad (ESL) tilmaamid kor loogu qaado kaa jira aqoon, tababarka, Iyo xirfadaha shaqada marka Ingiriisigu yahay dhalashadaada maahan luqadda. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka shahaadada ayaa laga yaabaa inuu sii kordhiyo awooddaada ku xiriiraan Ingiriisi iyo shaqo raadso or college fursadaha Mareykanka.
Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa tayeynta iyo horumarinta naxwaha, aqrinta, qorista, dhageysiga iyo hadlayay xirfadaha, iyo fahamka. Intaa waxaa sii dheer, barashada kombiyuutarka oo kaa caawinaysa barashadaada luqadda Ingiriisiga iyo xirfadaha barnaamijyada.
Dhammaan fasallada ESL-ka waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo qaabkeenna khadka tooska ah ee Teknolojiyadda (TEC) Iyada oo TEC karti leh, hadda waa suurtagal in lagu kasbado shahaadadaada Ingiriisiga raaxada gurigaaga.
Raadinta Barnaamijka Darajada
Faahfaahinta Ingiriisiga Sida Luqad Labaad (ESL)
Halkee Ka Qaadan Kartaa ESL?
Hodges wuxuu ku bixiyaa koorsada ESL xerada Fort Myers laga bilaabo 8:30 subaxnimo - 1:20 pm Isniinta ilaa Khamiista.
Saddex Koorso 16-Toddobaad ah Heerkiiba
Naxwaha (Heerarka 1-3)
Akhriska / Qorista (Heerarka 1-3)
Dhageysi / Hadal (Heerarka 1-3)
Shuruudaha Ogolaanshaha Barnaamijyada ESL:
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​dibloomada dugsiga sare ama GED.
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan sharci si ay ugu noolaadaan iyo / ama wax uga bartaan Mareykanka koorsadeena shaqsiyeed.
Codsadeyaashu waa inay ahaadaan ugu yaraan 18 sano.
Codsadeyaashu waa inay buuxiyaan Foomka Aqoonsiga Codsadaha ESL, oo loo adeegsado in lagu go'aamiyo u-qalmitaanka lagu qoro barnaamijka.
Gargaarka Maaliyadeed ayaa loo heli karaa Heerarka 1-3 ardayda u qalanta. La hadal an Isuduwaha Ogolaanshaha si loo ogaado haddii aad u qalanto Gargaarka Maaliyadeed.
* Fadlan ogow, ardayda caalamiga ah ee haysta fiisooyinka F-1 ee raadinaya barnaamijka ESL waxay u baahan doonaan inay kaqeyb galaan fasallada xerada.
Faahfaahinta Ingiriisiga Kulliyadda Diyaarinta
Diyaarinta Kuliyada Ingiriisiga
Kooras Ingiriisi ah oo udiyaar garoobaya kuleejo aan sidoo kale lagu bixinaynin heerka sare. Koorsadan waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo barashada luuqada Ingiriisiga ardayda barbaratay ee Ingiriisiga ee u diyaar garoobaya kuleejka ama u baahan in la kordhiyo aqoontooda aqoonta Ingiriisiga ujeedooyin xirfadeed.
Koorso 16-Tabobar Xirfadaha Isku-dhafan
Akhriska, Qoraalka, iyo Naxwaha (Heerka 4)
Xagee Kaqaadan Kartaa Ingiriisiga Diyaarinta Kuliyada?
Hodges wuxuu ku bixiyaa koorsada Ingiriisiga Diyaarinta Kuliyada xerada Fort Myers laga bilaabo 8:30 subaxnimo - 1:00 pm Isniinta ilaa Khamiista.
Buundada Ingiriisiga Intensive
Buundada Barnaamijka Ingiriisiga Intensive
Buundada Barnaamijka Ingiriisiga ee Deg-degga ah waxaa loogu talagalay kuwa u baahan barashada luqadda Ingiriisiga si ay ugu sii wataan shahaadada Jaamacadda Hodges. Barnaamijkan wuxuu siiyaa ardayda afkooda hooyo uusan aheyn Ingiriis an koorso degdeg ah taasi waa loogu talagalay inay kuu diyaariso inaad wax aqriso, qorto, oo aad isticmaasho naxwaha iyo erayada. Barnaamijkeena waxaa wax ka bara macallimiinta ESL-ka oo bixiya tababar ballaaran oo ku saabsan fahamka iyo adeegsiga waxyaabaha heer jaamacadeed ah
Barnaamijka Ingiriisiga degdegga ah
Koorso 12-deyn ah ayaa lagu bixiyaa heer sare oo ah aqoonta Ingiriisiga, oo lagu go'aaminayo qaadashada Imtixaanka Galitaanka HU. Koorso 16 usbuuc ah ayaa lagu bixiyaa xarumaha Fort Myers iyo Naples.
Xagee Kaqaadan Kartaa Ingiriisiga Deg-degga ah?
Shuruudaha Gelitaanka Ingiriisiga Intensive:
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan sharci si ay ugu noolaadaan ama / ama wax uga bartaan Mareykanka.
Kaalmo lacageed ayaa loo heli karaa ardayda u-qalanta.
La xiriir Ogolaanshaha Wixii macluumaad dheeraad ah.
Johnny Dorrine, Shaqaalaha BB&T iyo Qalinjabinta Hodges ESL iyo Barnaamijyada Maamulka Ganacsiga
Sababtoo ah Buundada Barnaamijka Ingiriisiga ee degdegga ah ee Hodges, waxaan awooday inaan ku sii gudbo fasallada ESL, Bachelor-ka ee Maamulka Ganacsiga, iyo inaan u gudbo xirfad wanaagsan oo dhanka bangiyada ah ee BB&T. ”
Ka bilow sheekada # MyHodgesStory maanta.